Google wuxuu naqshadeeyay Hangouts qaab jilicsan oo dhab ah | Wararka IPhone
Google wuxuu dib u qaabayn ku sameyaa Hangouts qaab jilicsan oo run ah
Haddii shalay aan ka hadlayey kacaankii e-maylku keenay dunida tikniyoolajiyadda, maanta waa inaan ka hadalno fariin deg deg ah. Waana taas, in kasta oo e-maylku yahay waxa hordhaca ah ee waxaas oo dhan u yimid si loo xalliyo dhibaatada xilliyada dib-u-dhaca ee ku lug leh dirista warqadda boostada, farriinta deg-degga ahi waa boostada fudud. Waa run in kastoo fariimaha degdega ahi si fudud u beddeli karaan emaylka, haddana tani waa wax sii fogaanaya, is-gaadhsiin gaaban oo waqtiga dhabta ah ah, in yar. qiyaas ahaan.
Iyo haddii Gmail uu yahay emaylka, ama emaylka, ee Google; Hangouts waa farriinta degdegga ah ee shirkadda weyn ee internetka. Inbadan oo idinka mid ah ayaa ogaan doonta Hangouts maxaa yeelay waxay ku dhexjirtaa Gmail lafteeda, qaabkeeda webka, a macmiilka fariinta degdega ah ee noo ogolaanaya inaan wicitaano iyo wicitaano fiidiyoow ah, laakiin runtu waxay tahay inaysan gaarin caannimada uu leeyahay walaalkiis ka weyn Gmail. Laakiin Google ma quusto oo raadinta bixitaanka Hangouts ka dib waxay umuuqataa inay heshay furaha ... Google wuxuu ku cusbooneysiiyaa Hangouts qaab jilicsan oo run ah ...
Iyo kuwa aan aqoon Slack, waxaan kuu sheegi doonaa inay u badan tahay inuu ka mid yahay qalabka shaqada ee inta badan loo isticmaalo heerka ganacsiga. Si aad noo fahanto, WhatsApp ee shirkadaha, taasi waa, barnaamij noo oggolaanaya abuuro kooxo shaqo oo ku wada xiriiri kara farriin deg deg ah iyada oo loo marayo barnaamijka laftiisa. Tanina waa tan u muuqata inay ku tijaabinayso Google Hangouts. Iyagu wali ma aysan furin laakiin xiriirkooda, waxay horeyba nooga sheegaan waxa ku saabsan suurtogalnimada abuuritaanka kooxo shaqo Hangouts lafteeda iyada oo ay suurtagal tahay in la wadaago farriimaha iyo feylasha qof kasta oo kooxda ka tirsan.
Waxaas oo dhan ayaa leh suurtogalnimada in la abuuro wicitaanno fiidiyoow ah iyo wicitaanno kooxeed, iyo sida muuqata suurtagalnimada wadaagaan dhammaan barnaamijyada casriga ah ee Google dhammaan xubnaha koox kasta. Waa fikrad fiican inaad tixgeliso isdhexgalka Gmail, iyo taas Hangouts waxaa horey loogu adeegsaday goobaha xirfadaha xaqiiqda dhabta ah ee ku dhexjirida Gmail. Sidaas wanaagsan Google, waxaan qabaa leedahay awood kugu filan oo aad ku daboosho Slack, markaa hadda waa inaan sugnaa sugitaankeeda rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Google wuxuu dib u qaabayn ku sameyaa Hangouts qaab jilicsan oo run ah
Ku raaxayso waqtiga meesha aad rabto shaashadaada qufulka adigoo ku mahadsan tweak-kan
Kudar animation-ka "TouchID" shaashaddaada qufulka leh isbadalkan